रोल्स रोयसको दावी : नयाँ टेक्नोलोजीले कार भित्र २ मिनेट भन्दा कम समयमै भाइरस खतम हुने | Automotive News Nepal
रोल्स रोयसको दावी : नयाँ टेक्नोलोजीले कार भित्र २ मिनेट भन्दा कम समयमै भाइरस खतम हुने १७ साउन, २०७७
रोल्स रोयसले नयाँ टेक्नोलोजीको विकास गरेको छ । कम्पनीका अनुसार कम्पनीका इन्जिनियरले माइक्रो इन्भायरोमेन्ट प्युरिफिकेसन सिस्टम (एमईपीएस) को विकास गरेका छन्, जसले कारको क्याबिनमा २ मिनेट भन्दा कम समयमा भाइरस नाश गर्न सक्छन् ।
कम्पनीका अनुसार एमईपीएसको साथ लेटेस्ट सेन्सर र नानोफ्लििस फिल्ट्रेसन टेक्नोलोजीको प्रयोगले कारमा पहिला भन्दा उच्च स्तरको हावाको शुद्धताको अनुभूति हुनेछ । एमईपीएसले हानिकारक कार्बन, पराग, भाइरस र व्याक्टेरिया जस्ता दुषित पदार्थबाट कारलाई बचाउन मदत गर्छ । सो सिस्टमले कारमा उपलब्ध हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको हुन्छ जसलाई एमईपीएस भनिन्छ ।
रोल्स रोयसमा जडान गरिएको सेन्सर अत्यधिक संवेदनशील भएकोले कार भित्र कुनै प्रदूषण भएमा अटोमेटिक तरिकाले रिसर्कुलेसन मोडमा पुग्छ । त्यसपछि २ मिनेट भित्र अल्ट्रा फाइन कण, भाइरस र व्याक्टेरियाबाट छुटकारा पाउनको लागि नानोफ्लििस फिल्टरले आफ्नो काम सुरु गर्छ ।
सो सिस्टमले अन्य कार निर्मातालाई सो कार एयर फिल्ट्रेसन सिस्टमामा ध्यान केन्दि«त गर्न प्रेरित गरेको छ । केही अटो निर्माता कम्पनीले यात्रीहरुलाई ताजा र स्वच्छ हावाको लागि लेटेस्ट टेक्नोलोजी सार्वजनिक गरेका छन् । उदाहरणको लागि हुन्डाईले हालै ३ नयाँ एयरकन्डिसनिङ टेक्नोलोजी सार्वजनिक गरेको छ ।
पावरफुल स्कुटर ‘गस्टो १२५’ नेपाली बजारमा
महिन्द्राको नयाँ स्कुटर ‘गस्टो १२५’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। महिन्द्रा टु ह्वि...
कस्ता हेलमेट छन् नेपाली बजारमा ? के भन्छन् बिक्रेताहरु ?
दुई पांग्रे सवारी साधनको लागि हेलमेट सुरक्षा मात्र नभई राइडरहरुका लागि स्टाइलिस...
भगतकृष्ण फुटसल विजेता बन्यो लुम्बिनी समूह, परिषद् उपाध्यक्षबाट पदक प्रदान
काठमाडौं – नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघले आयोजना गरेको दोस्रो भगतकृष्ण...